Villa Soomaaliya oo looga yeeray mid kamid ah Musharixiinta ugu cad-cad xilka Ra'iisul Wasaaraha | KEYDMEDIA ENGLISH
Villa Soomaaliya oo looga yeeray mid kamid ah Musharixiinta ugu cad-cad xilka Ra’iisul Wasaaraha
Lama saadilin karo ilaa hada cida loo magacaabayo Ra'iisul Wasaaraha, balse Cabdullaahi Cali Xasan ayaa kamid ah shaqsiyaadka ugu cad cad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in goordhaw Villa Soomaaliya looga yeeray mid kamid ah Musharixiinta ugu cad cad in loo magacaabo xilka Ra'iisul Wasaaraha cusub.
Eng Cabdullaahi Cali Xasan oo ah sii hayaha xilka Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegaya in madaxtooyada looga yeeray. Wararka hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in ninkan uu kamid yahay shaqsiyaadka uu madaxweyne Farmaajo la rabo xilka Ra'iisul Wasaaraha.
Madaxweynaha ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan la yeelanayay Odayaasha Beelaha Hawiye, isagoo kala tashanaya qofka ugu mudan ee loo magacaabi karo Ra'iisul Wasaaraha cusub.
Waxaa miiska saaran shaqsiyaad saameyn ku dhex leh siyaasadda Soomaaliya, iyo kuwa haatan xilal sare ka haya dowladda Federaalka. Beelaha Habargidir iyo Abgaal ayaa aad ugu loollamaya Kursiga, inkastoo ay jiraan beelo kale oo doonaya inay helaan.
Inkastoo ay dhici karto in Ra'iisul Wasaaraha uu ka yimaado dhinaca Mucaaradka, hadane Farmaajo ayaa doonaya inuu soo magacaabo qof muddo kororsiga uu rabo kala shaqeyn kara, maadaama Kheyre arinkaan dartiis kula tageen.
Comments Topics: farmaajo kheyre madaxtooyada villa soomaaliya